Nhau - Kushandiswa kwePipe Pipe
1. MIPA yekuchera pombi
Pakati pese mapurasitiki epurinjiniya, HDPE ine yakanyanya kupfeka kuramba uye ndiyo inonyanya kuoneka. Iyo yakakwira iyo mamorekuru uremu, iyo inowedzera kupfeka-isingabatike iyo zvinhu iri, kunyangwe ichidarika akawanda esimbi zvinhu (senge kabhoni simbi, simbi isina simbi, bronze, nezvimwewo). Pasi pemamiriro ekuora kwakasimba uye kwakawanda kupfeka, hupenyu hwebasa iri kanokwana ka4 kanopfuura keiyo yesimbi pombi uye ka9 kaiyo yakajairika polyethylene; Uye irikupa kugona kunovandudzwa ne20%. Iyo murazvo unodzora uye antistatic zvivakwa zvakanaka uye zvinosangana nezvinodiwa zvinodiwa. Hupenyu hwebasa repasi hwapfuura makore makumi maviri, iine mabhenefiti anoshamisa ezvehupfumi, kusagadzikana kwesimba, kupfeka kuramba uye kurwisa kaviri.
2. PE tsvina tsvina
Pe pombi yekurasa tsvina inonziwo yakakwira density polyethylene pombi, zvinoreva kuti HDPE muChirungu. Mhando iyi yepombi inowanzo shandiswa seyekutanga sarudzo yeminisiparati mainjiniya, anonyanya kushandiswa muindasitiri yekurapa tsvina. Nekuda kwekupokana kwayo, acid kusagadzikana, kurwisa ngura, kupisa kwakanyanya kupisa, yakasimba kumanikidza uye humwe hunhu, zvishoma nezvishoma yakatsiva chinzvimbo chemapaipi echinyakare senge mapaipi esimbi uye mapombi esimende mumusika, kunyanya nekuti pombi iyi iri kurema uremu. uye zviri nyore kuisa uye kufamba, uye ndiyo yekutanga sarudzo yezvinhu zvitsva. Vashandisi vanofanirwa kutarisisa zvakanyanya kune anotevera mapoinzi pavanosarudza mapaipi akagadzirwa neichi chinhu: 1. Nyatsoteerera kusaruro yezvigadzirwa zvemapombi epurasitiki. Kune zviuru zvemakiredhi epolyethylene mbishi zvigadzirwa, uye kune zvakasvibirira zvinhu zvakaderera sezviuru zviuru zveyuan patani mumusika. Zvigadzirwa zvinogadzirwa neichi mbishi zvinhu hazvigone kuvakwa, zvikasadaro, rework kurasikirwa kuchave kwakakura. 2. Kusarudzwa kwevagadziri vemapaipi kunozotungamirwa kune vakagadzwa uye nehunyanzvi vagadziri. 3. Paunenge uchisarudza kutenga mapaipi ePE, tarisa vagadziri ipapo kuti uone kana vaine kugona kugona.
3. Pe pombi yemvura
Mapaipi e PE ekuwaniswa kwemvura ndiwo anotsiviwa nemapombi echinyakare esimbi uye pombi dzemvura dzePV yekunwa.
Iyo pombi yemvura inofanirwa kutakura kumwe kumanikidza, uye PE resin ine yakakwira mamorekuru uremu uye yakanaka michini zvivakwa, senge HDPE nebwe, inowanzo sarudzwa. LDPE nebwe rine yakaderera tensile simba, murombo kumanikidzwa nemishonga, murombo kuomarara, murombo ndeiya yakaita kugadzikana panguva Kuumbwa uye kuoma kubatana, saka haina kukodzera senge zvinhu zvemvura yekumanikidza pombi. Nekudaro, nekuda kweiyo yakakwira hutsanana index, PE, kunyanya HDPE resin, chave chinhu chakajairika zvinhu zvekugadzira yekunwa mapaipi emvura. HDPE resin ine yakaderera melt viscosity, yakanaka fluidity uye nyore kugadzirisa, saka iyo melt index ine akasiyana sarudzo, kazhinji iyo MI iri pakati pe0.3-3g / 10min.